Xiisad u dhaxeysa Mareykanka & Itoobiya oo xoogeysatay | Allbalcad Online
Home CAALAMKA Xiisad u dhaxeysa Mareykanka & Itoobiya oo xoogeysatay
Xiisad u dhaxeysa Mareykanka & Itoobiya oo xoogeysatay
Dowladda Itoobiya ayaa ka dalbatay Mareykanka inay sharaxaad ka bixiyaan hadal ka soo yeeray madaxwaynaha dalkaas Donold Trump.
Qoraal ay soo saartay Wasaarada arrimaha dibadda ee Itoobiya ayaa lagu sheegay in wasaaradda arrimaha dibadda ee Itoobiya ay u yeertay safiirka Mareykanka u fadhiya magaalada Addis Abab.
Bayaanka wasaaradda arrimaha dibadda ee Itoobiya ayaa sidoo kale waxaa wax aan la aqbali Karin ku tilmaamay in madaxwayne Mareykan ah oo xil haya uu huriyo colaad dhexmarta Masar iyo Itoobiya.
Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Itoobiya ayaa dhanka kale u sheegay safiirka Mareykanka in Itoobiya aysan waligeed ka baqin hanjabaad ka dhan ah madaxbanaanideeda, isla markaana ay diyaar u yihiin inay sii wadaan wadaxaajoodka ay gar-wadeenak ka yihiin midowga Afrika.
Previous articleXaliimo yareey oo eedeyn kulul u jeedisay Dowlad Goboleedyada
Next articleMaamulka G/Banaadir oo Amar dul-dhigay Maamulada degmooyinka